Ihe mgbu dị ala na-adịghị ala ala: Ọgwụgwọ Eziokwu Eziokwu Ọhụrụ nke Mbụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Ihe mgbu dị ala na-adịghị ala ala: Ọgwụgwọ Eziokwu Eziokwu Ọhụrụ nke Mbụ
AppliedVR, onye ọsụ ụzọ na-aga n'ihu n'ọgbọ na-esote nke ọgwụgwọ immersive, taa mara ọkwa na US Food and Drug Administration (FDA) enyela de novo nkwado maka flagship immersive therapeutic, EaseVRx, iji na-emeso ala azụ mgbu na-adịghị ala ala, nke na-enwetabu nhọpụta ngwaọrụ ngwaọrụ. na 2020. Akụkọ ahụ na-abịakwa n'ikiri ụkwụ nke AppliedVR na-ekwupụta ego $ 36 nde usoro B, na-ebute mkpokọta ego ya na $ 71 nde.
EaseVRx bụ ngwaọrụ ọgwụ ndenye ọgwụ nwere ọdịnaya ngwanrọ ebugoro n'elu ikpo okwu ngwaike nke na-ebuga ọzụzụ nchịkwa mgbu dabere na nka akparamagwa na ụzọ omume ndị ọzọ. Ọ na-eji sistemụ immersive mebere eziokwu (VR) nke na-ebuga ọdịnaya VR ka ọ na-etinye nkuzi mgbu biopsychosocial, ọzụzụ iku ume diaphragmatic, mmega ahụ nke uche, mmega ahụ nzaghachi nzaghachi na egwuregwu ndị isi.
Ọdịnaya ngwanrọ EaseVRx nwere izu asatọ, mmemme dabere na VR nke na-enyere ndị mmadụ aka ibelata ogo mgbaàmà yana mmetụta mgbu ha. Ndị nwere ihe mgbu na-adịghị ala ala na-agbaso usoro ahụike kwadoro, usoro ihe àmà na-egosi iji zụlite nkà na-anagide ihe ma na-emepụta àgwà ọhụrụ, na-enye aka nke nwere ike ibelata ihe mgbu na nkwụsị mgbu.
Matthew Stoudt, onye nchoputa na onye isi oche nke AppliedVR kwuru, "Nkwenye FDA nke taa bụ ụbọchị dị egwu maka AppliedVR, maka ngalaba ọgwụgwọ immersive yana, nke kachasị mkpa, maka ndị ahụ na-arịa ọrịa azụ mgbu na-adịghị ala ala." "Mgbu mgbu na-adịghị ala ala nwere ike ịbụ ihe na-agwụ ike na nsogbu dị oke ọnụ, ma ugbu a, anyị na-abịaru nso n'inweta ihe mgbaru ọsọ anyị nke ime ka ọgwụgwọ immersive bụrụ ụkpụrụ nlekọta mgbu."
AppliedVR's FDA nrubeisi kwadoro site na ule abụọ a na-achịkwaghị achịkwa (RCT), na-atụle ịdị irè nke mmemme dabeere na VR maka ọgwụgwọ onwe onye nke mgbu na-adịghị ala ala n'ụlọ. Ọmụmụ ihe abụọ ahụ kwubiri na usoro ọgwụgwọ VR nke na-achịkwa onwe ya, nke dabeere na nkà abụghị nanị ụzọ a pụrụ ịdabere na ya na nke nwere ike ịgwọ mgbu na-adịghị ala ala, ọ dịkwa irè n'ịkwalite ọtụtụ ihe mgbu na-adịghị ala ala.
Ọmụmụ ihe mbụ, nke e bipụtara na JMIR Formative Research, nyochaa data sitere na ndị mmadụ na-ata ahụhụ na-adịghị ala ala azụ ma ọ bụ fibromyalgia mgbu n'ime ụbọchị 21. Ndị na-eso ya na-eji EaseVRx belatara ihe ngosi ihe mgbu ise - nke ọ bụla n'ime ha zutere ma ọ bụ gafere ọnụ ụzọ 30-percent maka uru ụlọ ọgwụ.
N'ime RCT dị mkpa ya na-amụ nchekwa na ịdị irè nke EaseVRx n'ime izu asatọ, ndị na-ekere òkè na EaseVRx otu na nkezi kọrọ ọganihu dị ukwuu na ọgwụgwọ ọgwụgwọ, gụnyere 42% mbelata na mgbu mgbu; 49% mbelata nnyonye anya ọrụ; 52% mbelata nnyonye anya ụra; 56% mbelata nnyonye anya ọnọdụ; na mbelata 57% na nnyonye anya nrụgide.
Ntinye aka na data ojiji dị oke mkpa nye ndị na-enye ya na ndị na-akwụ ụgwọ ga-enyocharịrị na ndị otu / ndị ọrịa ga-eji ọgwụgwọ dijitalụ - ọkachasị n'onwe ha na mpụga ntọala ụlọ ọgwụ. N'ime ọmụmụ ihe dị mkpa, ndị sonyere EaseVRx gosipụtara ntinye aka dị elu na nkezi mmecha nke oge 5.4 kwa izu wee gosipụta afọ ojuju na ịdị mfe nke iji na Sistemụ Usability Scale (nhazi ngwaọrụ dị mfe iji karịa ATM na ọrụ email kacha elu).
"Anyị rụsiri ọrụ ike n'ime afọ ole na ole gara aga iji wuo ihe akaebe na-enweghị atụ nke na-egosi ike VR maka ọgwụgwọ mgbu, na enweghị ike inwe obi ụtọ karịa iji nweta ihe dị mkpa a dị mkpa," Josh Sackman, AppliedVR co. nchoputa na president. "Mana, ọrụ anyị akwụsịghị na otu nkwado a. Anyị kpebisiri ike ịga n'ihu nyocha nke na-akwado nrụpụta anyị na ọnụ ahịa ọnụ ahịa maka ịgwọ mgbu na-adịghị ala ala na ihe ngosi ndị ọzọ. "
Ihe mgbu dị ala bụ otu n'ime ọnọdụ ndị na-adịghị ala ala nke ndị mmadụ na-eche ihu n'ụwa nile ma na-anọchite anya otu n'ime ihe ndị kachasị elu mere ndị mmadụ ji atụ uche ọrụ. Na mgbakwunye, ọ bụ nsogbu dị oke ọnụ maka ndị insurers ka ọtụtụ na-achọ ibelata ụgwọ ọrụ metụtara ịwa ahụ azụ. Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya gosiri na, mgbe ejikọtara ya na mgbu olu, obere ihe mgbu na-efu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ijeri $ 77 na mkpuchi onwe, $ 45 ijeri mkpuchi ọha na eze, na $ 12 na-akwụ ụgwọ n'akpa uwe maka ndị ọrịa.
Ihe mgbu na-adịghị ala ala, nke sara mbara karị, na-efu ọnụ ma na-enye aka na nsogbu ahụike ndị ọzọ, gụnyere ọrịa opioid. Nnyocha Johns Hopkins gara aga na Journal of Pain chọpụtara na mgbu na-adịghị ala ala nwere ike na-eri ihe dị ka ijeri $ 635 kwa afọ - karịa ọnụ ahịa ọrịa kansa, ọrịa obi na ọrịa shuga na-efu kwa afọ.
"A na-ejikarị ihe mgbu na-emeso ya naanị site na usoro biomedical na akụkụ ndị dị mkpa nke ihe mgbu na-enweghị ọgwụgwọ," ka Dr. Beth Darnall, onye ndụmọdụ ọkachamara sayensị AppliedVR na onye ọkà mmụta ihe mgbu Stanford kwuru. "Nnyocha anyị na-egosi na VR nwere ike ịbawanye nlekọta mgbu na-adịghị ala ala 'mmadụ dum' nke ndị mmadụ nwere ike iji mee ihe na nkasi obi nke ụlọ nke ha. Dị ka onye ndu ngalaba ọgwụgwọ immersive, AppliedVR bụ ugbu a ka edobere n'ọnọdụ kachasị mma iji weba mgbanwe paradaịs gaa na nlekọta mgbu enwere ike.
N'ịgbaso nkwado FDA mbụ ya, AppliedVR na-ezube ịnọgide na-anwale iji gosipụta ịdị irè nke ụlọ ọgwụ na ọnụ ahịa nke iji VR na-agwọ mgbu, karịsịa na-emecha ọtụtụ ihe gbasara akụ na ụba na ahụike na nsonaazụ (HEOR) na ndị na-akwụ ụgwọ azụmahịa. AppliedVR na-arụkọkwa ọrụ ugbu a na Geisinger na Cleveland Clinic iji kwalite nnwale ụlọ ọgwụ dị iche iche nke NIDA kwadoro nke na-anwale VR dị ka ngwa na-echekwa opioid maka nnukwu mgbu na-adịghị ala ala.
AppliedVR atụkwasịrịlarị ntụkwasị obi karịa 200 nke sistemu ahụike na-eduga n'ụwa. Ihe dị ka ndị ọrịa 60,000 ejirila nkà na ụzụ ahụ mee ihe ruo taa na njikwa ihe mgbu na mmemme ahụike.